Hayso shahaadadaada bachelor-ka si xirfad leh oo ay u qoraan waraaqo xirfadlayaal ah
Qor qoraalkaaga bachelor-ka
Qoraalkaaga bachelor-ka cilmiyaysan ha loo qoro si xirfadaysan. Anaga waxaad naga heleysaa caawimaad deg deg ah khibrad, aqoonyahan qoraaga ah.
Qoraalka bachelor-ka - is qor	oder	ha qorto
ka shahaadada bachelor waa qoraalka ugu horreeya ee tacliimeed ee ku saabsan mowduuc cilmi baaris ku habboon. Waxay ka kooban tahay qiyaastii. 20 illaa 35 bog oo waqtiga wax qabadku badanaa yahay 2 illaa 4 bilood. Iyada oo la kaashanayo shahaadada bachelor farqiga u dhexeeya cilmi baarista waa in la xiraa.
Qoraalka bachelor-ka - Muxuu ka mid noqon karaa daraasadda habboon?
Das Qorista shahaadada bachelor-ka Waxay u taagan tahay imtixaankii ugu dambeeyay ee heerkaaga waxbarasho ee ugu horreeyay ee waxbarasho Iyada oo la sameynayo qoraalka, ardaydu waa inay hirgeliyaan qaababka ay asal ahaan u barteen si ay u horumariyaan mowduucyada la xiriira cilmi baarista. Asal ahaan, shahaadooyinka bachelor-ka waxay sida caadiga ah wax ka qabtaan ka shaqeynta su'aasha cilmi baarista ee ku saabsan mowduuc horeyba wax looga qabtay. Jarmal ahaan, sidaas darteed, isku-dubarid aqoon ah oo horeyba loo gaadhay. Si kastaba ha noqotee, arday badan waxay dareemaan inay culeys ku hayaan howshan ballaaran. Taasi maahan inay sidaas ahaato!
Mawduuca saxda ah ee cilmiga bachelor-ka
Arday badan ayaa ku adkaata inay helaan mowduuc ku habboon cilmiga bachelor-ka ama sameynta su'aasha cilmi-baarista. Miyaad isku dhibaato haysataa? Mise waxaad u baahan tahay caawimaad si loo helo farqi cilmi baaris oo ku habboon?
Sida caadiga ah, ardaydu waa inay doortaan mowduucyo ay ku muujinayaan xiise aad u weyn. Tusaale ahaan, miyaad si gaar ah u jeclayd mawduuc ama maaddo intaad wax baraneysay? Haddii aad uga jawaabi karto su'aashan haa, horeyba hal talaabo ayaad u sii qaadday. Intaa waxaa dheer, waxaa markaa jira in la caddeeyo waxa suugaanta hadda jirta ay ku saabsan tahay mawduucaaga. Ma heli kartaa ilo wanaagsan oo dooddaada taageera? Haddii aad haa uga jawaabi kartid su'aashan sidoo kale, markaa waxaad awood u leedahay inaad u gudubto qorshaynta shaqadaada.
Haddii aadan ka wada jawaabi karin labada su'aalood haa, ama haddii laguu qoondeeyay mowduuc aan adiga kugu habboonayn, arrimuhu sidii hore way ka duwan yihiin Si kastaba ha noqotee, ceeb ma aha inaad caawimaad ka raadsato tan. Waxa loogu yeero tababarka, sida aad badanaa ka hesho borofisarkaaga, waa hubaal in la oggol yahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno cilmi baarista iyo qaabeynta saxda ah ee su'aashaada cilmi baarista. Ka faa'iideyso sannado badan oo khibrad ah iyo shaqaalaheena xirfadda leh. Wadajir ayaan xal u heli doonnaa.
"Wow, si aad u wanaagsan ayaan u soo maray! Aad baad u mahadsan tahay!"
Bachelor-ka Warbaahinta Is-dhexgalka
Qaab dhismeedka qoraalka bachelor-ka - waxa loo baahan yahay in la fiiriyo markii la qorayo qoraalkaaga
Sida shaqo kasta oo tacliimeed, waxaa sidoo kale jira sharciyo ku saabsan daraasadda bachelor-ka ee ay tahay in la raaco. Qaab dhismeedka dhabta ah ee shahaadada bachelor-ka wuxuu ka kooban yahay xaashi dabool, miis ka kooban iyo tusmooyin kale, qayb qoraal ah, iyo sidoo kale buug-gacmeed iyo lifaaq. Tani way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran barnaamijka kursiga iyo barnaamijka shahaadada.
Si kastaba ha noqotee, arrimaha soo socda ayaa guud ahaan ansax ah:
Badanaa waxaa laga heli karaa jaamacadda oo ah tusaale ahaan daboolka wejigaaga shahaadada bachelor Tan waxaa ka mid ah cinwaanka shaqada, qoraaga, kormeeraha borofisarka iyo faahfaahinta jaamacadda aad ku qoreyso qoraalkaaga bachelor-ka.
Si loo bixiyo aragti guud oo ku saabsan mowduucyada lagaa qabtay shaqadaada iyo in si cad loo caddeeyo qaab dhismeedka doodaha muhiimka ah, waxaad raacdaa xaashida daboolka kooban. Jadwalka mawduucyada wuxuu u qaybiyaa mawduucyada waaweyn iyo qodobbada hoose cutubyada waaweyn iyo kuwa hoosaadyada wuxuuna siinayaa lambarrada bogga Halkan waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo in qaabeynta ay tahay mid hagaagsan oo waafaqsan xeerarka, taas oo ku kala duwanaan kara iyadoo ku xiran qaabka.
Tusaha kale sida liiska tirooyinka, soo gaabinta iyo miisaska
this Diiwaanada si toos ah uga dib buuggaagta, laakiin badanaa waa waxa ugu dambeeya ee lagu daro warqad. Mana aha marwalba qayb aasaasi ah oo shaqo ah, maxaa yeelay halkan waxay kuxirantahay inta Miisaska, Soo gaabinta iyo Sawirada U adeegso shaqadaada. Si kastaba ha noqotee, waxay siiyaan akhristaha aragti guud oo ah alaabooyin sharaxaad dheeri ah ama fududeyn inta qoraalka lagu jiro ka hor waxayna sahlayaan in si dhaqso leh loo helo sawirro muhiim ah ka dib.
Qaybta qoraalka - wadnaha qoraalkaaga bachelor-ka
Hadda waxay u timid shaqada dhabta ah, oo ah qorista qoraalkaaga doodda. Shuruudda aasaasiga ahi waa qaab qeexan oo qaabeysan oo ay tahay inaad abuurto ka hor intaadan bilaabin qorista qoraalkaaga. Iyada oo tan laga caawinayo waxaad ku haysaa dun guud oo ku jirta qoraalkaaga bachelor-ka oo waxaad xoogga saari kartaa sawir guud oo isku mid ah inta aad wax qoreyso Qaab dhismeedku wuxuu u shaqeeyaa qaab cayiman sida buug tilmaame loogu talagalay Qorista qoraalkaaga bachelor-ka. Qeybta qoraalka, sidoo kale, shuruudaha qaabeynta ee jira waa in lagu ilaaliyaa iyo qaabka xigashada saxda ah marka la isticmaalayo ilaha suugaanta.
Si gaar ah muhiim ayey u tahay goorta buugaagta Waa lagama maarmaan in la hubiyo in tixraacyada suugaanta ay dhameystiran yihiin, maxaa yeelay xatooyada ayaa isla markiiba kuu horseedeysa fashilkaaga shahaadada bachelor. Halkan gaar ahaan, qawaaniinta qaabeynta ayaa mar labaad lagu dabaqayaa, kuwaas oo qiime gaar ah la saarayo markii la saxo shaqada, sababtoo ah waxay ka tarjumayaan habka habraacaaga iyo aqoontaada tacliimeed. Waxay kuxirantahay qaabka, qaabka loo bixinayo macluumaadka aad ayey u kala geddisan yihiin, waana sababta ay aad muhiim ugu tahay inaad si faahfaahsan ula tashato kursigaaga.
Si loo soo koobo shaqadaada ayaa lifaaqataasi kuma jiraan ereyga ama tirinta bogga shaqadaada dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, lifaaqa wuxuu ku siinayaa fursad aad ku soo koobto shaqadaada waxyaabo dheeraad ah iyo inaad ku taageerto qaab dhismeedkaaga doodda. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa agab muhiim ah halkan (oo aan mar dambe) ku habboonayn shaqada.
Laakiin maxaa la gudboon haddii aadan garanayn waxa xiga ee aad samaynayso?
Shaqadaadu ha qorto
Sidaa darteed, waa inaad haysataa qoraalkaaga bachelor-ka oo ay qortay wakaaladda qorista
Taageero xirfadeed oo ku saabsan shahaadadaada bachelor-ka
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno bilow ilaa dhamaad!
Waxaan heli doonnaa midka saxda ah Mawduuc ku saabsan daraasaddaada bachelor-ka. Laga bilaabo diyaarinta soo bandhigida: Dhibaato ama su'aal iyo xaalad cilmi baaris illaa himilo / mala-awaal, hannaan iyo qaab dhismeed illaa iyo buug-gacmeedka horudhaca ah. Mahadsanid qoraalka, waxaad la socon kartaa dulucda iyo qaab-dhismeedka qoraalka oo aad u abaabuli kartaa cilmi-baaristaada si hufan.
la khibrad qorayaal khibrad leh Kaliya ha helin muunad aad iska leedahay shahaadada bachelorlaakiin nidaamka dhammeystiran ee wareysiyada iyo qiimeynta khibradda leh. Sida ugu fiican Wakaaladda qoraalka waxaan kuu xaqiijinaynaa gebi ahaanba caqli gal iyo Aqoonsi la'aan.
Ku guuleystey qoraalka, laakiin aan hubin su'aalaha, qaabeynta iyo in ka badan?
Tifatirkayaga iyo akhrinteena ayaa labadaba wanaajiya luqadeed Tayo sidoo kale farsamo Aqoontaada Qoraal. Kaliya taas Akhrinta, khaladaad badan ayaa lagaa ilaaliyaa oo shaqooyin dheeri ah ayaa lagugu sameeyaa.
Ardayda badanaa waxay iloobaan sida loola macaamilo si sax ah cadaadiska jira awgood dabeecad, Qoraalada, isticmaalka Cudur daar iyo inbadan. Waxaan leenahay khubaro maadooyinka oo dhan, si had iyo jeer aad u hesho tafatiraha saxda ah macmiil ahaan, kaasoo sidoo kale og qodobada saxda ah.
Qor qoraalkaaga bachelor-ka ama dib u akhrin iyo ku raaxeysiga faa'iidooyinka waraaqaha.
Si sharci ah, dhakhso iyo xirfad ahaanba!
Xilliga kama dambaysta ah ee soo gudbintaadu waa soo dhowdahay, weli waa inaad barataa oo aad wax ka ogaataa imtixaannada jaamacadeed ee soo socda Dhibaatooyinka waqtiga awoodin inuu sii wado? Dhib malahan! Anaga waad naga helaysaa caawimaad xirfadeed ka khibrad iyo qoraaga ghostwriter, iyada oo aan loo eegin mawduuca! Qorayaashayaga ghostwriters waxay leeyihiin dulmar guud oo casri ah oo ku saabsan suugaanta qaybtooda, waxay aad u yaqaanaan eraybixinta laxiriira waxayna yaqaanaan sida loo isticmaalo hababka maadooyinka gaarka u ah si sax ah si loo hagaajiyo shahaadada bachelor si guul leh loo dhammaystiro Iyada oo kooxdeena ay garab taagan tahay, waad wax u baran kartaa imtixaannada soo socda oo mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho shaqadaada saynis Darajada Bachelor dhigi!
Su'aalaha ku saabsan qoraalka bachelor-ka iyo waxa muhiimka ah haddaad u oggolaato inay wax qoraan
Sidee qaali u tahay in la qoro shahaadada bachelor-ka?
Sida caadiga ah, qorayaasheena waxay ka shaqeeyaan qoristaada bachelor-ka 14 maalmood gudahood. Waxay kuxirantahay qeexitaanka iyo mowduuca, tani waa shaqsi. Tani sidoo kale waa qiimaha si gaar ah looma qeexin. Sababtoo ah waqtiga uu qoraagu qorayo qoraalkaaga bachelor-ka, wuxuu sidoo kale ka shaqeyn karaa waaxda gaarka loo leeyahay. Tixgeli xisaabta Qoraa khabiir ah badanaa la kasbado, maadaama ay kugu qaadaneyso isla waqti isku mid ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaad heli kartaa a codsi aan qasab ahayn dhigay ama a Diyaarso latashiin la caddeeyo dhammaan su'aalaha ka hor.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la qoro shahaadada bachelor-ka?
Qorayaashayadu way awoodaan 14-31 maalmood gudahood qor sheeko bachelor ah. Ku aaddan a Inaad u qorto qoraalka bachelor-ka ugu fiican waxaad qaadan doontaa qoraa takhasus leh oo ku saabsan qaybtaada illaa intaad tahay.
Papernerds wuxuu u xilsaaraa qorayaasha shahaadada sare iyo baxnaaninta oo kuu qori kara shaqo aad u wanaagsan. Si laguu xaqiijiyo tayo sare leh oo ka sarreysa dhammaan shahaadada bachelor-ka oo dhammaystiran, weydii waqti fiican.
Dabcan, qoraa khibrad leh ayaa ku qori kara qoraalkaaga bachelor-ka waqti aad u gaaban, laakiin tani waxay si hubaal ah u yareyn doontaa tayada iyo dhammaystirka shaqadaada.
Ayaa iga caawin doona qormadeyda bachelor-ka?
Marka lagu daro macallimiin khibrad leh, dhakhaatiir iyo cilmi-baarayaal aad wareysan karto, waxaad fursad u leedahay inaad la shaqeysid tababare ama qoraa aan kugula talinay.
Waxaan haynaa qoraalo aad ufiican oo leh dhakhaatiirta iyo baxnaaninta, iyo waliba borofisarrada Emeritus ee meelaha qaar oo kaa caawin kara qoraalkaada bachelor-ka.
Miyaad ku bixin kartaa shahaadadaada bachelor-ka qaybo yar?
At Papernerds dabcan waxaad ikhtiyaar ugu leedahay inaad ku bixiso kharashka ku baxa shahaadadaada bachelor-ka. Waan ku faraxsanahay Qeybinta bixinta iyo qeyb bixinta diyaarso
Laakiin maskaxda ku hay in qoraagu uu qaban karo shaqadaada waqti-buuxa oo keliya marka si buuxda loo bixiyo. Haddii kale waa inuu aqbalaa shaqooyin kale oo dhexdooda ah si loo hubiyo dakhligiisa.
Yaa dhab ahaan qoraya shaqada?
Aad bay muhiim noogu tahay in heerarka tayada ay sax yihiin. Tani waa sida saxda ah sababta aan kaliya ula shaqeyn karno macallimiin khibrad leh, aqoonyahanno iyo qoraayaal ka socda waaxyaha. Qof kasta oo qaba shahaadada bachelor-ka ee nala qoray sidoo kale wuxuu fursad u leeyahay inuu isku duwo oo uu si faahfaahsan ugala taliyo qoraalkooda. Miyaad jeceshahay inaad waxbadan ka barato aqoonta qorayaashayada Nala soo xiriir fadlan!
Dhammaan su'aalaha kale iyo jawaabaha kale ee ku saabsan qoraalka iyo qoraallada waxaa laga heli karaa annaga Qeybta Su'aalaha.
Xirfadlayaashu way ku caawiyaan
Tifaftirayaashayagu waa khabiiro tacliimeed oo ku saabsan shaqooyinkooda waxayna abuuraan shaqadaada cilmiga ah iyadoo loo eegayo rabitaankaaga shaqsiyeed.
Si aad u hesho caawimaad
fulinta degdeg ah
Soo gudbi codsi bilaash ah hadda waxaadna heli doontaa shaqadaada cilmiyaysan taariikhda aad dooratay! Waxaan ku fulineynaa shaqadaada waqtiga loogu talagalay.
Samee codsi bilaash ah
Shaqo kastaa waa mid gaar ah
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xoriyad damaanad qaad ah oo lagaa xaday khayaanada iyo khaladaadka adiga oo u maraya baaritaano tayo sare leh sidaa darteedna waxaan ku caddeyneynaa in shaqadaadu tahay nuqul shaqsi ah oo tayo sare leh. Xatooyo malahan, cawaaqib xumo malahan - qorista xirfadeed ee ghost.
Codso shey u gaar ah
Waad ku mahadsan tahay kaalmada degdegga ah iyo kartida leh ee ka socota waraaqaha, waxaan awooday inaan si wanaagsan isu diyaariyo. Mahadsanid!
Jule H.Barista boostada
Taageerada ay ka heleen tifaftirayaashayaashayda 'Papernerds.de' waxay siiyeen shaqadayda guriga dhammeystirka taabashada. Xiriirku wuxuu had iyo jeer ahaa mid saaxiibtinimo leh oo karti leh.
Iyada oo gacan ka heleysa warqadleyda aad ayey ufududeyd in la helo warqad xilliyeed ah jaamacaddeyda.
Mila S.Jarmal ahaan luqad shisheeye
Waad ku mahadsantahay kaalmada weyn. Runtii waa wax lagu farxo in lala shaqeeyo dadka garanaya waxa ay sameynayaan. Kaliya waa lagula talin karaa!
Felix M. daawo
Adiga la'aanteed ma aanan sameyn lahayn waqtigeyga ugu dambeeya! Mahadsanid. 🙂
Caawinaad ayaan helay maxaa yeelay anigu kamaan kari karayn waqtiga. La-taliyahaygu aad buu iiga jawaabayey sidoo kale wuxuu aad u caawiyay wajiga sixitaanka. Mahadsanid, sii wad
Maxim A.Shaqada bulshada